Afar Arrimood oo laga fahmay go’aankii Trump ee Qudus |
Afar Arrimood oo laga fahmay go’aankii Trump ee Qudus
Halkan waxaa ku eegeynaa falanqeyn ku saabsan waxa laga qaadan karo siyaasadda Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa’iil.
Maamulka Trump oo rajo geliyay Falastiin
Bil ka hor, diblumaasi sare oo u dhashay Falastiin oo ku sugan Washington ayaa BBC-da u sheegay in uu aaminsan yahay in madaxweyne Trump uu ku guuleysan karo xalka Falastiin iyo Israa’iil, wuxuuna intaa ku daray in madaxdii ka horeysay ay ku fashilmeen.
Kullan kasta, Trump wuxuu xaqiijinayay in “naftiisa u hibeeyay hannaanka” nabadda, ayuu yiri Husam Zomlot, wakiilka ururka xureynta Falastiin (PLO).
Waxay ahayd rajo wanaagsan oo laga qabay arrinta aadka u adag ee ah xal ka gaaridda qalalaasaha labada dhinac u dhexeeya. Balse waxay ahayd mid aad ugu filan in wakiillada nabadda ee Trump ay u sheegaan Falastiin in xiriirkooda Aqalka Cad uu aad sare ugu sii kacayo.
Ayadoo la sii xoojinayo arrintaa ayuu Mr Zomlot wuxuu diyaariyay musaanabadda xuska ciidda masiixiyadda oo lagu qabto dhismaha Capitol Hill oo ay ka qeybgali lahaayeen xubno sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka iyo Congress-ka.
Dunida oo si caro leh uga jawaabtay go’aanka Trump ee Qudus
Waxaa arrintan laga damacsanaa in si toos ah loogu baahiyay dadka deggan magaalada Baytullaxam oo loo muujiyo muuqaal ka imaanaya wadnaha siyaasadda Mareykanka.
Ururka xoreynta Falastiin ayaa munaasabadda joojiyay ka dib markii uu maqlay waxa uu ku saabsanaa go’aanka Trump ee Qudus. Wuxuu sheegay in aysan ahayn mid habboon in ay dhacdo munaasabadda ayadoo Trump uu Qudus ka dhigay caasimadda Israa’iil.
Arrinta xaqiiqada ah waxay tahay in Falastiiniyiinta iyo hoggaamiyayaasha Carabta uu la yaab ku noqday go’aanka Trump, kaas oo aan qeyb ka ahayn istiraatiijiyadda Bariga Dhexe.
Waxaa jiro warar la isla dhexmarayo oo ah in Trump uu adeegsanayo xeelad uu qalqal ku abuurayo si uu waddada ugu xaaro wadahadallada nabadda.
Balse waxaa aad u cad in uu diiradda saarayo fulinta wixii uu Israa’iil u ballanqaaday xilligii ololaha siyaasadda uu ku jiray markii uu codka ka raadsanayay Yahuudda Mareykanka deggan iyo masiixiyiinta diintooda ku adag.
Sida laga soo xigtay illo kala duwan, Mr Trump waxaa ku jahwareeray mucaaradidda kooxdiisa amniga qaran oo Isniintii ka dooday fursadaha dhanka amniga iyo in raro safaaradda Mareykanka..
Saraakiisha waxay sheegeen in madaxweynaha uu aqbalay in uu saxiixo qorshaha dib loogu dhigayo raridda safaaradda, balse wuxuu aqoonsaday in Qudus ay caasimad u tahay Israa’iil iyo in la billaabo hannaanka lagu rarayo safaaradda.
“Iyadoo madaxweynayaashii hore ay ololaha ku ballanqaadeen arrintan,” ayuu yiri Mr Trump oo guul ku tilmaamay tallaabadiisa, “Way ku fashilmeen in ay fuleen. Maanta, aniga ayaa fulinaya”, ballanqaadkaasi, ayuu yiri.
Waa arrin masiixiyad ah
Madaxweyne ku xigeenka Mike Pence ayaa dhoola cadeynayay markii Trump uu ku dhawaaqayay go’aankan wax wayn ka bedelay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Pence waa nin si wayn galaangal ugu leh in Trump uu ku qanciyo in uu raaco wixii uu ololaha ku ballanqaaday, waana nin ay siyaasaddiisa ka muuqato sida uu ugu adag yahay diintiisa masiixiyadda iyo wuxuuna aaminsan yahay madaahibta Evangelicals, kuwaas oo taageera xushmeynta Israa’iil.
Taasi maysan dabamarin xildhibaan Falastiini ah oo masiixi ah, Hannan Ashrawi. “Allahey iima sheegin waxa uu isaga rabbigiisa u sheegay,” ayey tiri xilli ay wareysi siineysay BBC-da.
“Anagaa ah masiixiyiinta saxda ah, waana inaga kuwa dhulka leh, anagaa boqollaal sano ku nooleyn dhulkan. Sidey ugu dhiiran karaan in ay ii yimaadaan oo iisheegaan bible-ka iyo waxa uu qabo!”
Dhanka kale, si lama filaan ah ayuu Mr Zomlot isugu deyay in uu adeegsado kaarkiisa masiixiyadda, iskuna xiro Beytullaxam iyo Capitol Hill. Wuxuu dadka u ololeeya Falastiin u sheegay in “nabi Ciise uu yahay hadiyad la siiyay Falastiin”, si taasi uu taageero ugaga helo Masiixiyiinta Mareykanka.
Tijaabinta Bariga Dhexada cusub
Siyaasadda cusub ee Trump waxaa ka dhalatay caro ballaaran oo ka timi dunida Carabta iyo Islaamka iyo xulafada Mareykanka.
Dhulka barakeysan ee Qudus ayaa ah waxa lagu muransan yahay, taas oo micneheedu yahay in hoggaamiyayaasha Carabta ay yar tahay in ay hoos uga dhacaan qaabkan waaqiciga ah, ayna ugu dambeyn la qabsadaan arrimaha muhiimka ah ee uu ku saleysan yahay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Israa’iil.
Urdun iyo Sacuudiga oo isu arka in ay yihiin ilaalada dhulka barakeysan ee Islaamka ayaa soo saaray digniin ah in arrintan ay hurin doonto Dunida Islaamka.
UN oo Trump uga digtay arrimaha Israa’iil iyo Falastiin
67 erey oo sababay qarni kala qeybsanaan ah
Laakiin kacdoonkii Carabta ayaa sababay in muhiimmaddii Falastiin ay meesha ka baxdo waxaana loo weecday arrimo muhiim ah sida Iraan iyo dhibaatada dalalka Khaliijka.
Sidaa aawadeed, Falastiiniyiinta waxay qaadeen tallaabo xoogaa u muuqatay mid caqliyeysan oo ay kula shaqeynayaan Israa’iil, waxayna u baahnaayeen in Trump uu ku lug yeesho.
Haddii dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka ay qeylada sii wadaan ayagoo aan ficil ku darin, tijaabadan cusub ee lagu sameeyay waxay dhalin doontaa gobol la dhoho Bariga Dhexada cusub.
Arrinta waxay salka ku haysaa laba dal
Marka la is hor fariisto, su’aasha ma noqoneyso in caasimadda Israa’iil ay tahay Galbeedka Qudus? Balse waxaa laga doodi doonaa in dhulka lahaysto ee Bariga Qudus ay noqoto caasimadda dal ay Falastiiniyiintu leeyihiin.
Mr Trump ayaa arrintaasi ka dhigay mid macquul ah isagoo sheegay in maamulkiisa uusan go’aan rasmi ah ka qaadan goobaha barakeysan, “sida xudduudaha ay Israa’iil u madax bannaan tahay ee Qudus, ama xallinta goobaha la isku haysto”.
Taasi waxay muujineysaa in Falastiiniyiinta ay sheegtaan Bariga Qudus weli looga hadli karo wada xaajoodyada. Balse ma uusan kala cadeyn Mr Trump arrintaa, sidoo kale ma uusan ka hadlin in ujeedada ugu dambeysa ay tahay in la helo laba dal oo deris wanaag uu ka dhexeeyo.
Taasi bedelkeeda, wuxuu sheegay in Mareykanka uu taageerayo xalka noocaas ah haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan: ma ahayn sinnaan la’aanta ay Falastiiniyiinta raadinayeen.
Ugu dambeyntii Trumo waxba uma ballan qaadin Falastiiniyiinta, hadalkiisa oo dhanna wuxuu ahaa mid uu ku taageeray, awoodna ku siiyay Israa’iil.